လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်နိုင်မှု ဦး တည်ချက် - ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ရိပ်မိနိုင်သည့်အသုံး ၀ င်မှု၏စေ့စပ်သေချာသည့်အခန်းကဏ္ ((၂၀၁၈) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ဆန့်ကျင်မှု၌ရှိသည်။
ခေါင်းစဥ်: လိင်ကအကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' လိင်စွမ်းဆောင်ရည်အရှေ့တိုင်းဆန်: ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ခံစား Utility ကို၏ဖြန်ဖြေအခန်းကဏ္ဍ
စာရေးသူ: Vandenbosch, လော်ရာ ×
ဗန် Oosten, Johann
ပေတရု, Jochen #
ထုတ်ဝေသူ: အယ်လ် Erlbaum Associates မှ
ြဒပ်မဲ့သော: Little ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း (SEIM) ကိုထိတွေ့လိင်ဆီသို့တစ်ဦးစွမ်းဆောင်ရည်-အာရုံစူးစိုက်တိမ်းညွတ်ဖို့ပြောပြတယ်ဘယ်လိုလူသိများသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အကြားသုံးလှိုင်း panel ကိုလေ့လာမှုအပေါ် အခြေခံ. (N ကို = 1,022), ကျနော်တို့စောင့်ကြည့်ကြောင်း SEIM (W)2W3 မှမဟုတ်ဘဲ W1 ထံမှ W2 ဖို့ Wave ကိုကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို orientation ကိုဟောကိန်းထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ W2 မှာတစ်ဦးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်တိမ်းညွတ် W3 မှာ SEIM မှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ SEIM မှထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိမ်းညွတ်အကြားဆက်ဆံရေးနှစ်ခြေလှမ်းဖျန်ဖြေမော်ဒယ်အားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ခံခဲ့ရသည်။ ပိုမြီးကောင်ပေါက်, W1 မှာ SEIM မှသူတို့ W2 မှာဒီအကြောင်းအရာစားသုံးပျော်မွေ့ပိုမိုထိတွေ့ခဲ့သည်။ အလှည့်၌, SEIM ၏ခံစား (W2) SEIM ၏မြီးကောင်ပေါက် '' ရိပ်မိ utility ကို (W2) ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ဤသည် W2 မှာရိပ်မိ utility ကို W3 မှာ SEIM ဆီသို့ ပို. ပြင်းထန်သောစွမ်းဆောင်ရည် orientation ကိုဟောကိန်းထုတ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒီ Two-ခြေလှမ်းမော်ဒယ်အတွင်း, ငါတို့သည်လည်း W1 SEIM (W2 / W3 / W1) နှင့် SEIM (W2 / W3 / W2) ၏ခံစားခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိမ်းညွတ်အကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးမျိုး (များအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထောက်ခံမှုသုံးပြီးအကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဟာအပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းကိုတွေ့ ) နှင့် SEIM (W3) ၏ utility ကိုရိပ်မိ၏။
ku Leuven ထုတ်ဝေအမျိုးအစား: IT
စုစည်းမှုများထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်: Mass ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန Leuven ကျောင်း